आफन्तले सैफसँग विवाह नगर्न सुझाव दिएका थिए तर करीना विवाहका लागि किन भइन् राजी ? access_timeजेठ ३१, २०७७
एजेन्सी - बलिउड अभिनेता तथा अभिनेत्री करीना कपूर र शैफ अली खानको विवाह भएको पनि थुप्रै वर्ष भइसक्यो । उनीहरुको एक जना सन्तान पनि भइसकेका छन् । बलिउडमा सुन्दर जोडीको रुपमा पनि चिनिँदै आएका सैफ र करीनाको विवाहको समयमा भने केही वैचारिक बहस भएका करीनाले खुलासा गरे...
करोडौं दर्शकको मन जितेका यी बलिउड अभिनेत्री अझै अविवाहित access_timeजेठ २९, २०७७
एजेन्सी : दर्शक र प्रशंसकका लागि बलिउड अभिनेत्रीहरु सधैं चर्चामा रहने गर्छन् । व्यक्तिगत जीवन होस् वा कामको सिलसिलामा होस् उनीहरुको बारेमा चर्चा परिचर्चा भइ नै रहन्छ । त्यसमा बलिउड अभिनेत्रीहरु निकै अगाडि छन् । फिल्ममा गरेको अभिनयका कारण करोडौं दर्शकको मनमा बस्न ...
रणवीरसँग ‘ब्रेकअप’ को बारेमा कैटरीनाको यस्तो खुलासा access_timeजेठ १५, २०७७
एजेन्सी - बलिउड अभिनेता रणवीर कपूर र अभिनेत्री कैटरीना कैफबीच केही समय चलेको प्रेम सम्बन्ध ‘जग्गा जासूस’ फिल्मको शुटिङपछि ब्रेकअप भएको भारतीय सञ्चार माध्यममा उल्लेख गरिएको छ । उनीहरुको सम्बन्ध विवाहको रुपमा परिणत हुने समेत चर्चा चलेको थियो भने उनीहरु ...
सलमान खानसँग विवाहको बारेमा लुलिया भन्तुरले दिइन् यस्तो बयान access_timeबैशाख २८, २०७७
एजेन्सी : बलिउडका सुपरस्टार सलमान खानको विवाह कहिले हुन्छ ? प्रशंसकहरु कयौं वर्षदेखि यो प्रश्नको जवाफ खोजिरहेका छन् । धेरै वर्षदेखि विभिन्न अभिनेत्री तथा युवतीहरुसँग प्रेम सम्बन्धमा रहेका सलमानको नाम विभिन्न समयमा विभिन्न युवतीहरुसँग नाम जोडिने गरेको छ । पछिल्...
‘१७ वर्षको वैवाहिक सम्बन्ध तोड्न निकै मुश्किल भएको थियो’ access_timeफागुन ९, २०७६
एजेन्सी : बलिउड अभिनेत्री तथा मोडल मलाइका अरोरा र अरबाज खानको सम्बन्धविच्छेद भएको लामो समय भइसकेको छ । दुवैले आपसी सहमतिमा सम्बन्धविच्छेद गरेका थिए । तर दुवैले १७ वर्षको लामो वैवाहिक सम्बन्ध किन तोडेका थिए भन्ने धेरैलाई चासोको विषय हो । सम्बन्धविच्छेद भएको ल...
सन्चो नभएपछि भावुक भएका कार्तिकले सारालाई बोकेर हिँडेपछि... access_timeमाघ २६, २०७६
यतिबेला बलिउडमा अभिनेता कार्तिक आर्यन र सारा अली खानको प्रेम सम्बन्धले चर्चा पाइरहेको छ । विशेषतः सारा र आर्यन आफ्नो नयाँ फिल्म ‘लव आज कल’ को प्रमोशनमा व्यस्त रहेका छन् । प्रमोशनको क्रममा सारा र आर्यनले गरेका विभिन्न क्रियाकलाप मिडियाको लागि चर्चाको ...
‘ककटेल पार्टी’ मा मलाइकाको पछि पछि अर्जुन कपूर access_timeमाघ २३, २०७६
बलिउड अभिनेत्री मलाइका अरोडा र अर्जुन कपूरको सम्बन्धको विषयलाई लिएर निकै चर्चा हुन थालेको छ । उमेरको अन्तरले पनि प्रेमसम्बन्धको बारेमा खबर बाहिरिएसँगै उनीहरु चर्चामा थिए । View this post on Instagram 🔊’Hi I’m good how are you? Nice to mee...
यी हुन् बलिउडका ६ विवादित विवाह access_timeमाघ १९, २०७६
मुम्बई । बलिउड कलाकार रिलेसन र प्रेम जीवनका कारण हमेशा चर्चामा छाउने गर्दछन् । कयौंपटक कलाकार आफ्नो च्वाइस अथावा विवाहका कारण पनि विवादमा फसेका छन् । जुन उनीहरुले अनुमान लगाएको भन्दा भिन्न रहने गरेको छ । अहिले यहाँ केही कलाकारको विवादस्पद विवाहको चर्चा गर्न खोजिएको...
सैफले करीनाको तारिफ गर्दै भने, ‘बेबोलाई पाएर निकै भाग्यमानी ठान्छु’ access_timeमाघ १७, २०७६
बलिउड अभिनेता सैफ अली खानले पछिल्लो समय निकै व्यस्त रहेका छन् । उनी व्यस्त मात्रै छैनन् चर्चामा पनि उत्तिकै आइरहेका छन् । ‘तानाजी’ फिल्मको सफलतापछि सैफ झनै चर्चामा आएका छन् । यसैक्रममा विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका सैफले करीनासँगको सम्ब...
जिया खानको हत्या कि आत्महत्या ? यसरी खुल्नेछ अब रहस्य access_timeभदौ ६, २०७६
बलिउड अभिनेत्री जिया खानको निधन भएको धेरै वर्ष भइसकेको छ । उनले सन् २०१३ मा पंखामा डोरी बाँधेर झुन्डिएर आत्महत्या गरेकी थिइन् । तर उनको मृत्युपछि हत्या र आत्महत्या के हो भन्ने रहस्य बाहिर आउन सकेन । यसैबीच यही विवादास्पद मृत्युलाई लिएर फिल्म बन्न लागेको छ । अभ...
बलिउड र हलिउडका स्क्रिप्ट राइटर नेपालमा access_timeभदौ ५, २०७६
चित्लाङ – बलिउडका चर्चित फिल्म लेखक रोबिन भट्ट र हलिउडका स्क्रिप्ट राइटर जेफ मोनाहान नेपालमा छन् । बुुधबारबाट मकवानपुरको पर्यटकीय स्थल चित्लाङमा सुरु भएको पटकथा लेखन कार्यशालाका लागि उनहरु नेपाल आएका हुन् । चलचित्र विकास बोर्डको सहयोगमा नेपाल फिल्म एन्ड कल्चर एके...
आलियाका ५ अफयेरः रणवीरसँग होला त विवाह ? access_timeसाउन ३१, २०७६
बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्ट र रणवीर कपूरको प्रेमसम्बन्ध बाहिरिएपछि उनीहरुको विवाहलाई लिएर भारतीय सञ्चार माध्यममा निकै चर्चा हुने गर्छ । दुवैलाई फरक–फरक कार्यक्रम तथा ठाउँमा सँगै देखिन थालेपछि उनीहरु चर्चा झन् चुलिँदै गएको छ । यसबीच, यी दुईले अभिनय गरेको फिल्म &...